Akuyona imfihlo ukuthi indlela yokuphila yabantu ithinta kakhulu uhlamvu lwabo, ukuziphatha kanye nemikhuba yabo. Futhi kuthiwani uma sicabanga ukuthi imikhuba yethu ithinta indlela yethu yokuphila, ukuthi singashintsha futhi sishintshe izimpilo zethu, shintsha imizwelo yethu kuphela kanye nokubonakaliswa kwabo kwangaphandle? Kungashiwo ngokuqiniseka ukuthi abantu abampofu nabacebile banemikhuba ehluke ngokuphelele. Futhi, mhlawumbe, kunengqondo ukufunda okuthile kulabo asebekwazile ukufeza empilweni okufunwa yiningi labantu abaningi - izinkulungwane eziningi kanye nezigidi? Kufanele babe yiziphi, imikhuba yomuntu ocebile?
1) Umsebenzi nomndeni.
Abaningi bakholelwa ngephutha ukuthi uma uzibekela umgomo wokuba umgidi, ngakho-ke ngomndeni kanye nokunye injabulo elula yomuntu kuzodingeka ukhohlwe ukuthi umsebenzi nomndeni awuhambisani. Eqinisweni, iningi labantu abacebile lithi ukusekela nokuqonda abathandekayo ababasiza ukuba banqobe ubunzima futhi bafinyelele umgomo owusizo. Kwakuwumndeni owawubakhuthaza ukuthi kufanele usebenze futhi uzuze. Ngakho-ke, labo abakholelwa ukuthi umndeni uyingqayizivele empilweni yomuntu onamaphupho okuthola okungenamsebenzi okwanele, kodwa okuningi, azilahla ukwesekwa, futhi, ngokunjalo, anciphisa amathuba okuzuza eyakhe.
2) Ingcebo yimali kuphela.
Kuwubuwula ukucabanga ukuthi imali kuphela ingabalulekile kumuntu ocebile. Abantu abacebile ngempela abacabangi izikweletu, kodwa ulwazi lwabo, amandla, amakhono. Bayazi ukuthi kungakhathaliseki inani lemali ku-akhawunti, bangajabula futhi bagcine induduzo yabo evamile, ngoba kakade bayakwazi ukuheha imali eningi njengoba befuna. Abantu abampofu benza iphutha elikhulu uma bekhathazeka nge-ruble ngayinye njengokungathi ayinakulondolozwa.
Ngokungangabazeki, ngamunye wethu unento yokuzihawukela yona. Sonke sasizithola sibhekene nezimo ezinzima, sasingafaneleki ngokungafanele noma sidluliselwe ngochungechunge lwezinkinga. Kodwa abantu abaphumelelayo abahlanganisi ubunzima besikhashana nabo ngokwabo. Abalingani ukulahlekelwa nokuhluleka ngobuntu babo, abazibekeli kuze kube yilapho bengavunyelwe ukuba abacebile noma ukuthi bazolahlwa ukwenza amaphutha.
Abaningi bathambekele ekuhleleni futhi bephupha, bezisola ngamathuba alahlekile futhi bakhulume ngalokho okuzokwenzeka uma ... Abantu abacebile benza ngesikhathi lapho wonke umuntu ephupha nje. Abazisoli ngokuthi akuphosi futhi lokho akufinyeleleki. Kukhona izinto eziningi emhlabeni ezingekho nakakhulu kunezo ezasidlula. Ngaphezu kwalokho, umuzwa wokuhawukela yiyona inhlabathi evundile kakhulu yokuhlakulela zonke izinhlobo zinkimbinkimbi ezivimbela impumelelo kuphela.
4) Ukususwa kwemali.
Abantu abacebile ngempela bacebile futhi bangaphakathi. Abaxhomeke emalini, futhi lokhu kubonakala kakhulu ekuziphatheni kwabo. Abasebenzisi imali nje ukuze bayisebenzise, ​​bangabonakali ukubaluleka kwabo futhi banganqobi nabanye kulabo abanokuningi. Abantu abacebile bayazi ukubaluleka kwemali, ngoba bazizuzile futhi bazi kahle ukuthi yini abayidingayo ngempela. Ngakho-ke ungasebenzisi imali ku-bullshit. Labo abampofu, abazi ukuthi bangayisebenzisa kanjani imali, abazi ukuthi bangababala kanjani, okuvame ukubenza bawalele ngokuphelele. Izinkulungwane zamacala aziwa emlandweni, lapho abampofu behluleka ukuphuma emzimbeni, base bethola ingcebo engenakulinganiswa, kodwa, bengakwazi ukulahlekelwa imali, bahlehliswa ngesikhathi esifushane.
Ngakho-ke, umuntu ocebile usebenzisa imali kuphela uma kudingeke ukuba imali isetshenziswe.
Ngesikhathi esifanayo, umuntu ocebile akafuni ukuhaha. Uyazi ukubaluleka kwemali, kodwa akayibeka phambili. Baye bahlukumezeka ukuba bahlukane, ukwesaba ukulahlekelwa, hhayi ukuzuza. Kubonakala ukuthi phakathi kwalabo bantu abacebile ngempela, abasebenzi bathola amaholo ahloniphekile namabhonasi. Umuntu ovikelekile ozimele ngemali yakhe futhi ucebile ngempela, usiza labo abadinga usizo. Lesi sici esihlukile, okubalulekile ngaso sonke isikhathi ukuzamukela.
6) Akuyona into yakho.
Kuqaphele ukuthi umuntu uphumelela impumelelo kuphela kulokho okujabulisa yena. Uma umsebenzi wakho ungakunaki, ngeke ube ngumuntu ophumelelayo ngaphandle kokuthi ushintshe umsebenzi wakho. Thola into oyithandayo ngempela, into esebenza cishe ngaphandle kokuzikhandla futhi ingasheshi ngokushesha. Mhlawumbe lawa magama angendawo engakulethela ingcebo.
7) Ukuhlaziyanisa okuqhathaniswayo.
Siphila emphakathini futhi sihlale siziqhathanisa nabanye. Omunye ufeza okuningi, othile omncane, futhi lokhu kuvamile ngokuphelele. Akunakwenzeka ukuba nazo zonke izinzuzo emhlabeni, kukhona umuntu obonakala engcono, ocebile, ophumelele kakhulu. Yiqiniso, ukuncintisana kukhuthaza impumelelo emisha, kodwa uhlanga oluqhubekayo lwento enkulu lungalimaza noma yikuphi ukufezeka, lwenze ize yonke imisebenzi. Abalahlekelwa yibo kuphela balwela ukukhipha wonke umuntu nento yonke, abantu abaphumelelayo bagxile emicabangweni yabo yangaphakathi, ngoba kubo kuphela umphumela wokuphumelela kwabo ukuzethemba.
Yonke le mikhuba ayinzima kakhulu kangangokuthi wonke umuntu akanakwazi ukuziqonda. Lolu uhlobo lwesiko lokuziphatha kanye namasiko okuphila. Lokhu akusona isiqinisekiso sokuthi uzoba nezigidi, ikakhulukazi uma ungafaki umzamo kuwo. Kodwa lokhu kuyisinyathelo esiqinisekisiwe esibhekiswe emcebweni, ngoba ukuzuza le mikhuba, ususa izithiyo eziningi endleleni ephusheni.
Ungenza kanjani inkumbulo ngekhanda konke okudingayo?
Umklomelo wokuqala wamazwe omhlaba emkhakheni wobuhle nempilo "Grace" wethulwa embukisweni we-TOP LINE
I-Venetian Film Festival: yini esikwaziyo ngokuncintisana kwefilimu yama-elitist?
Ingozi yesibongo esihle
Ukubhula kwendabuko ngoKhisimusi kumakhandlela
U-Anastasia Kostenko okhulelwe uvele ngasese ebhalweni: ngeke ukholwe ukuthi igama likaTarasova lithatha kanjani (ividiyo)
Isitayela sengqondo ezembatho
I-omelette iphekwe kuhhavini
Iphunga casserole nge ushizi
Ulwandle usawoti kanye nesicelo sakho
Izindebe ezinhle kakhulu zeNyaka Omusha 2016 ngezinwele ezinde, isithombe
Ama-Makeup for eyes slanted
Iklabishi isaladi nge isithombo kanye sage